Hevitra MPANOHARIANA | Oktobra 2007
Ry fitaratra O! iza no tsara noho izaho?
2007-10-10 @ 08:49 in Toekarena
Fony fahakely aho dia nandre karazan’anganom-bazaha nilaza ny fialonan’ny renikely ny zanaky ny mpanjaka. Izay no fitadidiako azy. Nihevitra ramatoa fa izy no tsara tarehy indrindra amin’ny fanjakana. Rehefa manatrika ny fitaratra izy dia manontany ny fitaratra hoe: “iza no vehivavy tsara tarehy indrindra?”. Dia mamaly tokoa, hono, ilay fitaratra. Izay tsara noho ramatoa dia omeny vorika na vonoiny avokoa. Angano Rainiboto io raha tsy diso ny fitadidiako. Mahatsiaro ilay angano aho raha mahita ny zavamisy eto Antananarivo amin’izao fotoana izao.
Efa hitako ihany nanomboka ny tapaky ny volana septambra ny fanapahana ny takela-by fanaovana dokambarotra eo ambonin’ny lozok’Ambanidia. Alindalina ihany manko aho no miserana eo matetika. Tsy nataoko hahagaga loatra raha nahita ny mpiasa mpamonjy voina sy mpamonjy haitrano nanala takela-by aho. Noheveriko fa fikarakarana tsotra ny nataon-dry zareo ka hanolokolo ny manodidina io toerana io no nanaovan-dry zareo io fanapahan-kevitra io. Na izany aza efa maizimaizina ihany ny andro no manao ny raharahany eo ry zalahy. Ora fanampiny ahazoana tambi-karama io izany, hoy aho anakampo.
Tonga indray ny fotoana manaraka dia nametaka takela-by indray ry zalahy rehefa avy noavahavaina ny manodidina. Fetsy koa anie ry zalahy izany e! Fa ny somary elaela ny nanaovan-dry zalahy azy dia ilay takelaby somary bebe velarana noho ny mahazatra izay (mbola tsy vita io hatramin’izao ary tsy nitohy ny asa hatramin’ny nivoahan’ny raharaha tamin’ny gazety). Tsarovy fa amin’ny alina hatrany ry zalahy no niasa tamin’ireo fotoana nolazaiko ireo. Tena mikarakara kosa ry zalahy izany hoy aho mahita ny fitohizan’ny asa.
Kanjo namoaka fanambarana nameno pejy iray tamin’ny gazety rehetra ankoatra ny an’ny filoham-pirenena mazava loatra na teny malagasy na teny vahiny ny orinasa Injet tantanin’Atoa Andry Rajoelina fantatra amin’ny anarana hoe “Andry TGV”. Tamin’ny anarana maha-mpitantana ny orinasa domapub (Dokambarotra Malagasy) moa no nanaovany ny fanambarana. Taratasy misokatra ho an’ny PDSn’Antananarivo Renivohitra manambara ny alahelony ny amin’ny fanapatapahana ny takelabin’ny domapub.
Teo aho vao gaga… hay ve tsy nierana tamin’ny mpitantana ny domapub ireo asa hitako ireo e! (ny hitako no lazaiko) Nosoratany fa 58 ny takelaby notapahin’ny Kaominina. Gazety iray no nahitako fa 46 ny takelabin’ny domapub fa 12 ny an’ny injet ka ireo isa ireo mitambatra no nolazain’ny manome ny 58 nosoratan’ny mpitantana. Manaraka izany dia nisy taratasy nalefan’ny Kaominina nanambara fa ireo takelaby izay notapahina dia afaka alain’ny domapub (sy ny injet) amin’ny alalan’ny fandoavana 100.000 Ar isaky ny takelaka. Fa inona ny heloky ny mpitantana? Lasa lavitra avy hatrany ny sain’ny mpanara-baovao.
Mananontanona (amin’ny 12 desambra 2007) manko ny fifidianana ho Ben’ny tanàna sy ny mpanolotsainan’ny tanàna ka mijery izay mpifanandrina atahorany handresy azy ny eo amin’ny antokon’ny fitondrana. Fahadisoana voalohany ny nampivandravandra teo imason’ny rehetra izany olona atahorany izany. Tsy nahay nianatra ny leson’ny tantara mihitsy ny mpitondra. Tamin’ny fanenjehana be dia be natao tamin’ny filoham-pirenena ankehitriny no namantaran’ny mponina teto andrenivohitra ny olona natahoran’ny Arema tamin’ny fotoan’androny. Ankehitriny, ny adala ihany no mamerina fahadisoana mitovy tamin’ny teo aloha.
Manaraka izany, teo amin’ny leson’ny tantara ihany, rehefa tena an-tenda ny aina ka manahy ny ho bankirompitra I Andry TGV, dia tsy maintsy mirotsaka hofidiana izy amin’io fifidianana ho avy io. Famonoantena ny namoaka fanambarana nefa tsy manohy ny andraikitra efa noraisina vokatry ny fanambarana. Efa be sahady ireo mivonona ny hanohana an-dranamana. Ny mpanohitra ihany koa efa faly anaty mahita ity olona nataon’ny fitondrana sorona ity. Ny ainga tena nifotoran’ny adi-hevitry ny olona moa dia ny resaka hoe nahoana no ny tanora miezaka sy misandratra toy ireny no anaovana antsojay toy izao? Ny fiaraha-miasa aza no tena tsara nojerena fa tsy ankasomparana.
Ny nampihomehy moa dia nanararaotra ihany koa ny mpifaninana amin-dry zareo amin’ity karazana dokambarotra amin’ny takelaby ity ka nanapa-kevitra ny hanapaka ireo takelabin’ny injety sy ny domapub ihany koa. Ny I-mada sy ny MadaOI (ny nasolo ireo takelaby teo ambonin’ny lozok’Ambanidia) moa no tena fantatra amin’izany fanararaotana izany. Tsy mbola nahitako na naharenesako kosa ny Jocker sy ny orinasa nitsangana vao haingana ny naharenesako azy dia Publivel, tsy fantatra ihany koa raha misy vondrona avy amin’iretsy Mada roa iretsy ireo farany na tsia. Ny tsaho, izany hoe tsy voamarina kosa, dia malaza ny hoe ireo I-mada sy MadaOI ireo dia miaraka amin’ny Mbsgroup ihany.